Kayseri Büyükşehir Konforlu Ulaşım İçin Çalışıyor | RayHaber | မီးရထားလမ်း အဝေးပြေး | ကေဘယ်လ်ကား
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး38 KayseriKayseri မြို့ပြမြူနီစီပယ်အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအလုပ်လုပ်သည်
10 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 38 Kayseri, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ကတ္တရာသတင်းများ, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, တူရကီ 0
Kayseri မြို့တော်စည်ပင်သာယာ၏မြို့တော်ဝန် Memduh Büyükkılıçသည်မြို့၏အဓိက Boulevards ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်း၏နွေရာသီကာလမှစတင်သည်ဟုသူကပြောသည်။ သမ္မတဘူဒက်ခ်ျလစ်ခ်ျ၊ ဘဂ္ဂဒက်လမ်းပြီးဆုံးသွားပြီဟု ထပ်မံ၍ ပြည်သူများကိုပြောကြားခဲ့သည်။
မြို့တော်မြူနီစီပယ်၏မြို့တော်ဝန် Memduh Büyükkılıç, နွေရာသီကာလနှင့်အတူ Erkilet Boulevard၊ ကျောက်ခင်းလမ်း, Talas Boulevard, Osman Kavuncu Boulevard, Erciyes တက္ကသိုလ်, Ildem သုသာန်လမ်း, Kiçikapıဘတ်စ်ကားစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဘဂ္ဂဒက်လမ်းပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းလုပ်ငန်းပြီးဆုံးပြီး 15 ဇူလိုင်လအသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီ ကော့တေး။
မြို့ပြမြူနီစီပယ်အသင်းများအနေဖြင့်လမ်းများ၏အရည်အသွေးနှင့်သက်တောင့်သက်သာရှိမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်၏အထွေထွေသဘောအရယာဉ်အသွားအလာပြတ်တောက်မှုကိုတားဆီးရန်နှင့် Boulevards ၏အဆင့်ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းအားဖြင့်ဤအလုပ်အတွင်းမြို့တော်ဝန်Büyükkılıçကပြောကြားခဲ့သည်။
မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအဖွဲ့မှအဖွဲ့များသည်ဘဂ္ဂဒက်လမ်းပေါ်တွင်လုပ်ငန်းများပြီးဆုံးသွားကြောင်းမြို့တော်ဝန် Memduh Büyükkılıçကပြောကြားခဲ့သည်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာမြင့်စွာအသုံးပြုမှုကြောင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေသောဘဂ္ဂဒက်လမ်းကိုနှစ်ပေါင်းများစွာမိမိတို့နိုင်ငံသားများစိတ်ကျေနပ်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ လုံခြုံရေးအဆင့်အတန်းကိုမြှင့်တင်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကော့တေးလ်လုပ်ငန်းများကိုကျွန်ုပ်တို့ပြီးမြောက်ပြီးပြည်သူလူထု၏ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးခဲ့သည်။ ကောင်းပါတယ်၊ မတော်တဆထိခိုက်မှုမရှိဘဲအသုံးချစေချင်ပါတယ်။
Metropolitan မြို့တော်ဝန်Büyükkılıç, Mimar Sinan အပြန်အလှန်အားဖြင့် ယနေ့မှစ၍ Mimar Sinan JunctionArgıncık Lights နှင့်စတင်အလုပ်လုပ်ရန်အသင်းများကိုအနှောင့်အယှက်မပေးဘဲဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သမ္မတBüyükkılıçသည် 43 ကီလိုမီတာခန့်မှန်းခြေကီလိုမီတာရှည်လျားသောနွေရာသီတွင်မြို့၏အလုပ်အများဆုံးလမ်းများကိုဖုံးလွှမ်းသွားသည်ဟုသူကပြောသည်။
သက်သာ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကနေကမ်းခြေ Access ကို 17 / 06 / 2018 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park, Kandıra Sahillerine ulaşımı kolaylaştırmak için sefere koyduğu iki otobüs hattı bu yaz da tatilcileri sahillere taşıyacak. Yaz aylarında Kocaeli ve komşu illerden gelen vatandaşların akınına…
Bursa ခြုံဖို့တတ်နိုင်နှင့်အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 18 / 06 / 2013 Ekonomik ve konforlu ulaşım Bursayı sarıyor Bursa Büyükşehir Belediyesi, özel halk otobüslerinin bütünleşik kart sisteminden çıkmak istemesi üzerine, vatandaşların mağdur edilmemesi için kademeli olarak tüm hatlarda sarı otobüslerle ulaşımı başlatıyor.…
အဆိုပါရေယာဉ်စုပို့ဆောင်ရေးဘဝမှကယျတငျနှင့်အတူBurulaşအဆင်ပြေ rejuvenated 16 / 09 / 2018 Bursa Metropolitan မြူနီစီပယ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီBurulaşနှင့်ပူးပေါင်းပါက 26 နှင့်အတူ6ဘတ်စ်ကားစီးပျမ်းမျှအသက်, နှင့်အသစ်ဝယ်ယူ 50 ဘတ်စ်ကားနှင့်အတူပုဂ္ဂလိကအများပြည်သူဘတ်စ်ကား၏ပျမ်းမျှအသက်3သို့ဆင်းသည်။
ပိုအဆင်ပြေဘို့ Izmir Metro သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေ့လာမှု (ဓာတ်ပုံပြခန်း) တွင်လုပ်ဖို့ Tamping 11 / 02 / 2016 İzmir Metrosunda Daha Konforlu Ulaşım İçin Buraj Çalışması Yapılacak :İzmir Metrosu, tren ile raylar arasındaki teması en ideal şekline getirmek için “milimetrik ölçümlerle düzeltme” işlemleri yapacak. “Buraj” adı verilen bu…
အများစုကအဆင်ပြေအစိမ်းရောင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး 09 / 11 / 2013 En konforlu yeşil ulaşım :Geleneksel taşımacılık yöntemlerinin yerini alacak olan akıllı raylı sistemler, son derece hızlı ve en güvenki taşımacılığın temsilcisi olacak. Raylı sistemler, ekonomik avantajlarının yanı sıra fosil yakıtlara…
ANTBIS စခန်းများကြေးကြေးနှင့်အသင်း ၀ င်အရောင်းအ ၀ ယ်များ
BISIM Stations Fee Schedule နှင့်အသင်း ၀ င်လုပ်ငန်းများ
Nextbike Konya စမတ်စက်ဘီးစခန်းများ
KAYBİSစခန်းများ၊ အသင်းဝင်ကြေးနှင့်အသင်း ၀ င်အရောင်းအ ၀ ယ်များ
အသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများစခန်းကြေးနှင့်အသင်း ၀ င်အရောင်းအ ၀ ယ်များ
သက်သာ Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ကနေကမ်းခြေ Access ကို
ပိုအဆင်ပြေဘို့ Izmir Metro သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေ့လာမှု (ဓာတ်ပုံပြခန်း) တွင်လုပ်ဖို့ Tamping
BURULAŞ, လိုင်း BursaRay များ၏တိုးချဲ့မှုနယူး Transit Lines Add အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။
အပြာရောင်အလံ Beach မှနှစ်သိမ့် Access ကို!
သွားဘက်ဆိုင်ရာ၏ Kocaeli အဆင်ပြေသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဌာနဆေးရုံ
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ နိုဝင်ဘာလ 2019 (141) အောက်တိုဘာလ 2019 (608) စက်တင်ဘာလ 2019 (557) သြဂုတ်လ 2019 (510) ဇူလိုင်လ 2019 (635) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (526) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (521) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (435) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (581) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (545) မတ်လ 2018 (554) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (426) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (493) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (542) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (504) ဇွန်လ 2015 (535) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1076) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (771) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (808) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (971) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (547) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1058) မတ်လ 2013 (1101) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (905) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1167) အောက်တိုဘာလ 2012 (829) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (973) ဇူလိုင်လ 2012 (859) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (562) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (11) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)